တော်လှန်သောဝိပဿနာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် | Mg Ogga's Notes
Mg Ogga / September 6, 2009
တော်လှန်သောဆိုတာနဲ့မလန့်ပါနဲ့ အများနဲ့မတူ တစ်မှုထူးတဲ့ဟာကိုဆိုလိုတာပါ။ကျနော်ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ သခင်သန်းထွန်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များ ဖတ်ပြီးတော့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ တော်လှန်သောဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော်တော်လေးသုံးထားတယ်။ ဒီစကားလုံးကိုကြိုက်လိုပါ တမျိုး မထင် ပါနဲ့နော် 🙂 🙂 🙂
အရင်တစ်ပတ်က စိတ်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးကြပုံကို ပြောဖူးတယ်ဗျ။ အခု ဟာအဆက်ပေါ့။ စိတ်ညစ်ညမ်းတာတွေပျောက်သွားဖို. စိတ်ကျင်စဉ် တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ် ဒါက ၀ိပဿနာပါ။ စိတ်ကျင့်စဉ် ဆိုပေမဲ့ အနောက်တိုင်းက နားလည်ထားတဲ့ ယောဂနဲ့ စိတ်ဖြေလျော့နည်းတွေ လို.မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တော်လှန်သောဝိပဿနာလို. ခေါ်တာပေါ့။
လူတွေဟာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ တပ်မက်မှု၊တခြားရုပ်ဝတ္ထု၊ရာထူးရာခံ၊လာဒ်လာဘ ရတာကိုမှာပျော် နေပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်မကောင်း၊အတင်းပြောခံ၊ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်း၊လာဒ်လာဘနည်းခြင်းတွေ ကြုံတွေ ရတော့ ပူဆွေး ၀မ်းနည်းကြတယ်။ ဒီလောကဓံတရားတွေကို တော်သင့်မှန်ကန်စွာ လက်ခံနိုင်ဖို. ၀ိပဿနာ အားထုတ် ဖို.လိုပါတယ်။
၀ိပဿနာဟာ လူလောကကြီးက မကောင်းမှုတွေကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ဖို.ကို အကူညီပေးပါတယ်။ ဒီလို ရှောင်ကွင်းတာဟာ တမင်တကာလုပ်ယူပြီးရှောင်ကွင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘော တရား လောကကြီးရဲ့သဘောတရားကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်တာမျိုးပါ။ ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်း စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေပါတယ်။ အနောက်တိုင်းက စိတ်ဖြေလျောနည်းမျိုးကတော့ ရုပ်ဝါဒကရေ ဆင်းသက် လာတာပါ။လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်း ပြဿနာမှာ လောကကြီးနဲ့ ပိုမိုဝင်ဆန့်အောင်ပြုပြင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူဘောင်လောက ဟာဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဝါးနေပါစေ နေပျော်တယ်လို.ထင်အောင် လုပ်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပါ ပဲ။ ၀ိပဿနာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး လူဘောင်လောကကြီင်္းကနေ လွတ်မြောက်ဖို.ပါ။ လောကီချမ်းသာ ထက်လောကီလွန်ချမ်းသားကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ကို ကောင်းစွာထိန်းကြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားရှိလာမှာပါ။ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားရှိမှပဲ သူနဲ့စပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သာယာလာမှာဧကန်ပါပဲ။
၀ိပဿနာဟာ လူကိုသူရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုသာ ပြည်မြောက်စေခြင်းအားဖြင့် ရိုးရှင်းတဲ့ဘ၀တစ်ခုတည် ဆောက် နိုင်ဖို.အခြေခံကောင်းတွေပေးပါတယ်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို.အတွက် လိုအပ်သလောက်သာ သဘာဝဆီက ယူငင်သုံးစွဲတဲ့အတွက် အလွန်အကြုံစားသုံးခြင်းကို ပယ်ရှားပြီးသလို စားသုံးသူပဓာန၀ါဒ ကိုလည်းတော်လှန်တိုက်ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။
အခုကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ မြေဆီလွှာတိုက်စားမှု ဥတုရာသီပုံစံကပြောင်းကပြန်ဖြစ်မှု၊မိုးခေါင်မှု၊ အချိုးအစား ကြီးတဲ့ သစ်တောခုတ်ထွင်မှု တွေအားလုံးရဲ့ ဘေးဥပဒ်တွေအားလုံးဟာ အရင်းစစ်ကြည်ရင် စာသုံးသူပဓာန၀ါဒနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံတစ်ရပ် ကိုကျင့်သုံးမချင်း အပေါ်ကပြဿနာတွေကို ကျော်နိုင်မှာမဟုတ်သလို ၀ိပဿနာအားမထုတ်ချင်း ရိုးရှင်းတဲ့ ဘ၀ဟန်ကို မရနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့ ၀ိပဿနာဟာ စာသုံးသူပဓာန၀ါဒရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် လောဘကို အတောသတ်ပေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
၀ိပဿနာအားထုတ်တဲ့ သူရဲ့စိတ်သဏ္ဍန်ဟာ အဓိကတွန်းအား ၀ယ်လိုအားဆိုတာကြီးကို ဖယ်ရှာပြီး ရောင့်ရဲ့မှုကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ နောက် နောင်လာနောက်သားတွေ အကျိုးစီးပွားအတွက် သဘာဝသံယံဇာတတွေကို အလွန်အကျွံစားသုံးမှု မပြုမိတော့ဘူး။ သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဇီဝမျိုးစုံရှင်သန်မှု ဟာဂေဟလောကအတွက် အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။
၀ိပဿနာဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှုကို သန်စင့်စေသလို သဘာဝတရာကြီးကလည်း လူတွေဖန်တီထုတ်လုပ်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းညစ်ညမ်းမှုကို သူအတိုငးတာနဲ့သူ သန်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် သဘာဝတရာဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းညစ်ညမ်းမှုကို မသန်စင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ရာဇ၀တ်မှုတွေ စစ်မက်တွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ကပ်ရောဂါတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တာ ၀ိပဿနာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းစာရိတ္တပိုင်း ပျက်စီးမှုရဲ့ အကျိုးရလဒ်ပါ။ အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလာစေဖို.တော့ သုစရိုက်အလုပ်တွေမျာများလုပ် ဒုစရိုက်ကို ရှောင်ကောင်းမွန်စွာစိတ်ကိုထား ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ သြ၀ါဒပါမောက်ထဲကလို ကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို.ပါပဲ။ ၀ိပဿနာတရားများများပွားများအားထုတ်ပြီး နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အညစ်ကြေးတွေကင်းကင်နဲ့ ရိုးရှင်းပြီး ရောင့်ရဲမှုရှိတဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀ဟန်ကို တည်ဆောက်ဖို.ဟာ ကမ္ဘာမြေတည်တံဖို.အတွက် အဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ်လူသားတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Ref: Meditation and Serving Society by Pracha Hutanuwa နှင့်
Prof:Lily de Silva ၏ Vipassana Its Relevance to the Present World
အမည်ရှိ နိုင်ငံတကာနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှာ ဖတ်ကြားသွာသောစာတမ်းကို ဘက္ခုသုဓမ္မ(EDP)ဘာသာပြန်ဆိုချက် ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊အမှတ်(၂၅)၊ဇူလိုင်လ၊၂၀၀၉ ပတ်ဝန်းကျင်အကျပ်အတည်းနှင့် ၀ိပဿနာ ၊နှာ၂၀၂-၂၀၆ ကိုမှီငြမ်းပါတယ်။
September 6, 2009 in ဘာသာရေးရာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ.